ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: November 2013
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်း စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့၊ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်း မိသားစုများ၏ မဟာဘုံကထိန်ပွဲတော်ကို ၁၀. ၁၁. ၂၀၁၃ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သော ဆရာတော်များအား အရုဏ်မုန့်ဟင်းခါးနှင့် နေ့ဆွမ်းတို့ကို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့ဆွမ်းမကပ်လှူမီ ဆရာတော်များနှင့် ပရိသတ်များ စုပေါင်း၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား နေ့ဆွမ်းကပ်လှူပူဇော်ခြင်း၊ ဆရာတော်များမှ ဘုရားအနေကဇာ တင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပရိသတ်များက စုပေါင်း၍ ဆရာတော်များအား နေ့ဆွမ်းနှင့် အချိုပွဲများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားကို နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ဆရာတော်၊ ဒိန်းမတ်ဆရာတော်၊ အင်္ဂလန်ဆရာတော်တို့မှ သီလပေးခြင်း၊ ပရိတ်တရားချီးမြှင့်ခြင်း၊ အနုမောဒနာတရား ချီးမြှင့်စသည်တို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အချိုရည်များနှင့် သောက်ရေသန့်တို့ကိုလည်း ကိုမျိုးလင်းအောင် + မလွင်လွင်ထိုက် (သမီး) ဟန်နီမျိုး မိသားစုတို့ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသော အလှူရှင်များ၊ အချိုပွဲဆက်ကပ်ကြသော အလှူရှင်များ၊ ကထိန်သင်္ကန်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသော အလှူရှင်များအားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာစွာနဲ့ သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဖရန့်ဖို့မြို့၊ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်မြဲဖြစ်သော ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကို ဖော်ပြပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကြွရောက်ကြည်ညို ကုသိုလ်ယူကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျင်းပမည့်နေ့ရက်။ ။ ၁၀. ၁၁. ၂၀၁၃ (တနင်္ဂနွေနေ့)
ကျင်းပမည့်နေရာ ။ ။ Nied Saalbau, Heinrich - Stahl - Str 3, 65934 Frankfurt am Main
ကျင်းပမည့်အချိန် ။ ။ နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၀၄း၀၀ နာရီအထိ
ပင့်သံဃာတော် ။ ။ ဘုရားအမှူးထား၍ အရှင်မြတ် (၅) ပါး ( အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဒိန်းမတ် တို့မှ ဆရာတော်များ)
၁။ ကိုတိုးအောင်ထွန်း + မအေးအေးကြည် (သား) မောင်ခန့်ဇော်ဟိန်း မိသားစုမှ ပုဇွန်သုပ်နှင့် သစ်သီးစုံ
၂။ ကိုနေ၀င်းလှိုင် + မမိစံ (သမီး) ဇူးဇူး မိသားစုမှ ငါးခြောက်ထောင်းကြော်
၃။ ဦးတင်ဖေ + ဒေါ်အုန်းမမ မိသားစုမှ ၀က်သားလုံးဟင်းစပ်ချက်၊ ကောက်ညှင်းထုပ်
၄။ ကိုအောင်အောင် + မစိမ့်စိမ့်လှိုင် (သား) မောင်သုတအောင် မိသားစုမှ ကြက်ကုန်းဘောင်၊ ကြက်သား ဖတ်
၅။ ကိုညီညီ + မသန်းသန်းဝင်း (သမီး) လုံးလုံး မိသားစုမှ ၀က်သားအချိုနှပ်
၆။ ကိုစိုးမြင့် + မနုနုထွေး မိသားစုမှ ပုဇွန်ဟင်း၊ အညာမုန့်
၇။ ကိုကြည်လင် + မသော်တာ (သား) မောင်မောင် မိသားစုမှ ငါးဖယ်ဟင်း၊ ကျောက်ကျော
၈။ ဦးစံရွေမောင် (ညီ) ဦးစံရွေကျော် တို့မှ ဘဲသားကြော်
၉။ ဒေါ်ကျင်သန်း (သမီး) မေထက်ကျော် မိသားစုမှ ငါးခူကြော်နှပ်
၁၀။ ဦးလှစု + ဒေါ်စိုးစိုးသိန်း မိသားစုမှ ကြက်ဥပူတင်း
၁၁။ ဦးသိန်းယု + ဒေါ်ချစ်ချစ် (သား) မောင်ဟဟ (သမီး) ဖိန်ဖိန်း မိသားစုနှင့် ကိုအောင်ဇေယျ တို့မှ မုန့်ဟင်းခါး၊ အချိုရည်နှင့် သောက်ရေသန့် တို့ကို ကြွရောက်တော်မူလာကြမည့် ဘုရားအမှူးထား၍ ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်မြတ် (၅) ပါးတို့နှင့် ဧည့်ပရိသတ်တို့အား တည်ခင်းဧည့်ခံ လှူဒါန်းကြမည်ဖြစ်ပါသည်။